Isifundo se-UbuChwepheshe BokuTadisha
Isivimbamgwaqo sokuqala okufanele usinqobe ukuze ufunde ngempumelelo noma yini.
Izithiyo ezintathu zokutadisha ezingavimbela ukuqonda kwakho isifundo—namathuluzi aqondile wokunqoba lezi zithiyo.
Ungafunda kanjani futhi uqonde ngokugcwele noma yisiphi isifundo osikhethayo.
Cabanga ngalokhu umzuzwana: Kukho konke ukufunda kwakho, ngabe ukhona owake wakufundisa ukuthi utadishe kanjani okuthile?
Namuhla, abantu abaphothula isikole abakwazi ukufunda noma ukubhala ezingeni elanele ukubamba umsebenzi noma ukubhekana nempilo. Kuyinkinga enkulu. Akukhona ukuthi izifundo azikwazi ukufundwa; Okungafundiswa ufunda kanjani. Kuyisinyathelo esilahlekile kuyo yonke imfundo.
U-L. Ron Hubbard ugcwalise lomgodi ovulekile ngokunikeza ubuchwepheshe bokuqala nobukuphela bokuthi ungatadisha kanjani. Uthole imithetho okususelwa kuyo ukufunda futhi wasungula izindlela ezisebenzekayo zokusebenzisa noma ngubani. Ubize isihloko ngokuthi “UbuChwepheshe BokuTashida.”
Lobu buchwepheshe buhlinzeka ukuqonda kwezisekelo zokufunda futhi bunikeza ngezindlela eziqondile zokunqoba zonke izingibe umuntu angahlangabezana nazo ngesikhathi sokutadisha.
UbuChwepheshe BokuTashida akusikona ukufunda ngejubane noma ubuqili benkumbulo. Lezi azikaze zafakazelwa ukukhulisa ikhono lomuntu lokuqonda lokho obekufundwa noma ukukhulisa ukufunda nokubhala. Ubuchwepheshe bokutadisha bukhombisa ukuthi kanjani isifundo esisodwa ukuze kuqondwe isihloko ukuze umuntu akwazi ukusisebenzisa sona.
Okuqukethwe lapha yingxenye encane kuphela yomzimba wonke woBuchwepheshe bokuTadisha obakhiwe nguMnu. Hubbard. Akukhathaliseki, lokhu kubuka okufushane kuqukethe okuyisisekelo ongakusebenzisa ukutadisha kahle kakhulu. Ngalobu buchwepheshe, noma yisiphi isifundo singafundwa yinoma ngubani.
Amahora ayisithupha kuya kwayisikhombisa. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana UbuChwepheshe BokuTadisha
Lapho sekuqediwe Isifundo se-UbuChwepheshe BokuTadisha, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngaphambi kokwenza i-The Technology of Study Course, benginobunzima bokufunda izinto ezintsha. Ngenkathi ngisesesikoleni, ngafunda ukuthi yini eyayingivimba ekutheni ngikwazi ukufunda. Lezi zithiyo ekutadisheni: Ukungabikho kwe‑mass, umyela oqansayo kakhulu, kanye ne-Ilizwi Elingaqondakali kulula ukungazinaki.
“Kodwa uma kulula ukungazinaki, zinamandla afanayo ekuxazululeni imfihlakalo yokuthi kungani bengingakwazi ukuqonda ezinye zezifundo zami zangaphambilini. Kwaze kwaba ngemuva kokuthi ngifunde ngalezi zithiyo namakhambi azo lapho engaqala khona ukuthola ukuqonda ngalokho engangikufunda. Kepha nangaphezulu, lapho ngiqala ukusebenzisa lezi zindlela ngokweqiniso, ukungakwazi kwami ukufunda noma yini entsha kushaywe umoya ngokuphelele.
“Angicabangi ukuthi kukhona engingakwazi ukukufunda manje. Lento kufanele ifundiswe ezikoleni yonke indawo. Ingazixazulula kahle zonke izinkinga zethu zemfundo!”
“Isihloko sezithiyo zokufunda singisize kakhulu. Ingilolile ingqondo futhi yanginika nesifiso esengeziwe sokufunda. Futhi kungisizile ukususa zonke izingqinamba ezingivimba ekuqhubekeni nezifundo zami.
“Igama elingaqondakali kahle: Lesi sihloko singiphosele inselele kakhulu. Manje sengiyazi ukuthi ngibhekana kanjani namagama anzima, ukuthi ngingawasula kanjani futhi ngiqhubeke nezifundo zami. Ngalokhu, ngizosiza abantu abaningi abasesimweni sokuzwa ukuthi badinga ukulahla isifundo noma imfundo.
“Ukusula amagama ayisisekelo: Lokhu kube yimpumelelo enkulu kimi ngoba ngesikhathi ngifunda lokhu, ngakhuthazeka kakhulu. Abantu abaningi abadonsa kanzima ekutadisheni bangaphansi kwalesi sigaba sokuzamula noma ukulala ngenkathi kufundwa. Ngalesi sigaba sesifundo, ngikwazile ukunqoba leso simo futhi ngizosiza abantu abaningi ekusaseni labo.
“Kukhokonke, lokhu kube yisifundo esihle esibalulekile kubantu abaningi, ikakhulukazi kubafundi noma labo abafundayo.”